အမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများ | FLEGT
အမျိုးသားအဆင့် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများ
ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) ၏ စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူရန်အလွာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ် သက်သူအားလုံးပါဝင်သောလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုကိုEUမှ ထောက်ခံ အကြံပြုပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ အတွင်း အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ ဒေသခံများနှင့် ဒေသခံတိုင်း ရင်းသားများ အကြား ကျယ်ပြန့်သော အများဆန္ဒကိုညွန်ပြပါသည်။ အားလုံးပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့် အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် သူများသည် VPA ပါအကြောင်းအရာ များနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးခြင်း များ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ပါဝင် အကြံပြုပါသည်။
သို့ရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအနေဖြင့် အနည်းဆုံး အစပိုင်းတွင် အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်သည့်ကွဲပြားသော အမြင်များရှိနေနိုင်သည်။ ဥပမာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသည် လေးစား လိုက်နာမှုကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ပြသနိုင်မည့် ရိုးရှင်းသော တရားဝင်ဖြစ်မှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို လိုလားလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဖက်အနေဖြင့် အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများသည် ဒေသခံများအတွက် တာဝန်ယူမှုများ ပါဝင်သောပို၍ အသေးစိတ်သည့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို လိုလားပါလိမ့်မည်။
အကျိုးဆက်စပ်သည့်အဖွဲ့များအကြားတွင်လည်း အမြင်များကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ သာဓကအားဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်တွင် လည်း VPA ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိနေနိုင်ပြီး မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များရရှိရန် သဘောတူညီချက်မျိုးအလိုရှိကောင်းအလိုရှိပါလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွင်းတွင် လည်းအကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ၏ အရွယ်အစားအကြီးအသေး အလိုက် ဦးစားပေးမှုအမျိုးမျိုး ရှိနေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများသည် မတူညီသော အမြင်များရှိနေသော်လည်း အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအားလုံးထောက်ခံသည့် ဘုံအကျိုးရှိမည့်နယ်ပယ်များကို ဖော်ထုတ်လုပ် ရန်ကြိုး ပမ်းပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ VPA၏ကဏ္ဍအားလုံးနှင့် ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံသည့် အများဆန္ဒကို ရရှိရန် မဟုတ်ဘဲ သဘောတူညီချက်အတွက် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား ယေဘူယျ ထောက်ခံမှု ရရှိရန်ဖြစ် သည်။
အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ အဆင့် ၂ ဆင့်
အမျိုးသားအဆင့်အများ သဘောတူညီမှုရရှိနိုင်ရန် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံသည် ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း အဆင့် တွင်စခဲ့သည့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါသည်။ အကြံပြု ခြင်းများသည် VPA အားလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သော၊ လေးစားလိုက်နာဖွယ်ဖြစ်သော နိုင်ငံပိုင် VPA အဖြစ် ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းများ၏ သဘာဝသည် သော့ချက်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါတို့အပေါ် တွင်မူတည်နေပါသည်။ ။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေခြင်းများအတွက် ထိရောက်သောယန္တရား
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ ၎င်းတို့အား ကိုယ်စားပြုရန် ရွေးချယ်လိုက်သည့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပါ၀င်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့တစ်ဉီးချင်းစီ၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့်ဖွဲ့စည်းပုံများကြား အချက်အလက်များ လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းအပေါ် ထိရောက်သောစနစ်များ
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အမှန်တကယ်လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
မတူညီသောနိုင်ငံများတွင် မတူညီသောချဉ်းကပ်ပုံများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများတို့ရှိကြသည်။ လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည် အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနေပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခြေအနေအသစ်များ နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ယနေ့အထိ VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှသည် အလွှာစုံမှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင် သောအဖွဲ့များအဖြစ် ပူးပေါင်းပြီး အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ကြ သည်။ အဖွဲ့တစ်ခုစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ချိန်ညှိရန်နှင့်ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးသားအဆင့်အများဆန္ဒရရှိစေရန် အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အားလုံး အပေးအယူလုပ်၍ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ယနေ့အထိအတွေ့အကြုံက တရားမျှတသော ကိုယ်စား လှယ်ပြုပါဝင်ခြင်းသည် သဘောတူညီမှုရယူရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်ဟုပြပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ညှိနှိုင်ခြင်းများသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့များအတွင်းအမျိုးသားအဆင့် အကြံပြု ဆွေးနွေးခြင်းများ နှင့်၊ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သော ဆွေးနွေးခြင်းများ အတွင်းဖြည့်သွင်း ရန် ဘုံရပ်တည်ချက် များကိုဖန်တီးရန် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် တမင်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ရပ်တည်ချက်များဖန်တီးရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဆွေးနွေး ၍ အထောက်အထားများကို စုဆောင်းကြပြီး သူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ဆန္ဒများကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုကြပါသည်။ အချို့အဖွဲ့များသည် ရပ်တည်ချက်စာတမ်းများကို ဖန်တီးခြင်း အားဖြင့် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ရွေးချယ် ကြသည်။
သစ်ကုန်သွယ်ရေး၌ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီများတွင်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များကို သူတို့ ပါဝင်ဆွေးနွေး နိုင်သည့် အသင်းအဖွဲ့များရှိပြီးသားဖြစ်နေနိုင်သည်။ ဤအဖွဲ့များသည် ပိုမိုကြီးမားပြီး အာဏာပိုရှိ သည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား ကိုယ်စားပြုပြီး အိမ်တွင်းသစ်အချော ထည်လုပ်ငန်း ရှင်များကဲ့သို့ အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်များကို ကိုယ်စားမပြုကြပါ။
အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်၊ သို့မဟုတ် ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် လက်ရှိမိတ်ဖက် အဖွဲ့များအတွင်းလုပ်ကိုင် နိုင်သည်သို့မဟုတ် အဖွဲ့အသစ်များဖွဲ့နိုင်သည်။ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့များ၏အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများတွင်လူ့အခွင့်အရေးများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ ကျားမတန်းတူ သို့မဟုတ် ဒေသခံတိုင်းရင်း သား၏အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်သည့်မတူညီသော ဦးစားပေး မှုများရှိနိုင်ပါသည်။ မတူညီသောဦးစားပေးမှုများ သည်အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ အတွင်းအများ သဘောတူညီမှုရရှိရေးတွင် စိန်ခေါ်မှုများရင်ဆိုင်စေပါသည်။
အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းများကို ထိခိုက်စေနေနိုင်သော စိန်ခေါ်မှုများ
EU နှင့် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေသည့် အစိုးရများအတွက်အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ အကြားယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်ကတိကဝတ်ထား ရှိမူကို သေချာစေရန်မှာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ် သည်။ သို့ရာတွင် အတွေ့အကြုံက အစိုးရများ အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဒီဇိုင်းဆွဲရန်၊ စုစည်းရန် နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရန်ဖြစ် သည် ဟုပြသပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းစဉ်က
ကိုယ်စားပြုအလွှာစုံမှအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ခြင်းတွင် နိုင်ငံ၏ရပ်တည်ချက်များ ကို သရုပ် ဖော်ရန် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများမှ သွင်းအားစုများကိုခွင့်ပြုသည့် ထိရောက် သော တုန့်ပြန်ချက် အုပ်စုများရှိခြင်း၊ နိုင်ငံ၏ရပ်တည်ချက်များ အပေါ်အငြင်းပွားခြင်း၊ ဆွေးနွေး ခြင်းနှင့် သဘောတူညီခြင်းများ အတွက်ထိရောက်သောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မူနည်းလမ်းများ ရှိစေခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသည့်အဆင့်ပြီး ဆုံးပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်သည့် အဆင့်တွင်လည်း ဆက်လက် ပါဝင်ခြင်းကိုသေချာ စေခြင်း၊
အစိုးရများအနေဖြင့် အကန့်အသတ်ရှိသော ယခင်ပူးပေါင်းဆက်ဆံခဲ့သည့်အဖွဲ့များ အပါအဝင် အကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအကြား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲများကို ဦးဆောင် ဆွေးနွေး နိုင်ရန်၊ ကွန်ရက် ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် သြဇာသက်ရောက်ရန် ရင်းမြစ်အသစ်များ၊ လုပ်ငန်းစွမ်း ဆောင်ရည်များ မကြာခဏ လိုအပ်သည်။ အစိုးရများသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ခြင်း ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုများနှင့် အစည်းအဝေးများကိုရန်ပုံ ငွေထောက်ပံ့ရန် လုံလောက်သောရင်းမြစ်များ ပေးရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင် ဆွေးနွေးရန် ဗဟုသုတ၊ စွမ်းရည်နှင့် ရင်းမြစ်များ ချို့တဲ့ကောင်းချို့တဲ့ နေနိုင်သည်။ အစိုးရများ၊ EU အဖွဲ့များ၊ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များအားလုံးသည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများတွင် ဗဟုသုတနှင့် အသိအမြင်ရှိစွာဖြင့်ပါဝင်ရန် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြည့်တင်း ပေးမည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ VPAမှစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမည်သို့မြှင့်တင်ပေးသနည်း နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ထောက်ပံ့ ခြင်း.ကဏ္ဍများတွင်ကြည့်ပါ။
သာဓကအားဖြင့် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ရာတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ သည် ပြဠာန်းဆဲဥပဒေမူဘောင်များကို နားလည်ရန်လိုအပ်သော်လည်း ထိုသတင်းအချက် အလက်များကိုရယူရန် ရုန်းကန်ရနိုင်ပါသည်။ သူတို့သည်တရားဝင်ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာရှု ထောင့်များကို သူတို့၏ မဲဆန္ဒရှင်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန် သို့မဟုတ် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း မှုများတွင်၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်များ ထောက်ခံအကြံပြုနိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်များ လို ကောင်းလိုနေပါလိမ့်မည်။ အစိုးရများ အနေဖြင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများအားလုံး လက်ခံသည့် နောက်ဆုံးအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် မချမှတ်နိုင်မီမှာ အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းများကို အကြိမ်များစွာလုပ် ရန်နှင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကောင်း လိုအပ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသားအဆင့် အကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် အားလုံးသဘောတူညီချက်ကို ရရှိရန် လုံလောက်သော အမြန်နှုန်းနှင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး အနေဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို နားလည်ရန်၊ ၎င်းတို့၏ ရပ်တည်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောဆိုနိုင်ရန်နှင့် VPA မှ ၎င်းတို့၏အကျိုးများ ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းကိုသေချာစေရန် အချိန်လိုအပ်သည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်၏ ကြိုတင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း အဆင့်
လက်မှတ်တိုရေးထိုးခြင်း၊ လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
VPA လုပ်ငန်းစဉ် ၏အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဆင့်
အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း ပုံစံများ
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သော VPA ဆွေးနွေးခြင်းများ
Canby, K. 2013. Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements (VPAs) or How to do effective consultation for national policies. Forest Trends PowerPoint presentation. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting.9October 2013, Brussels. [PowerPoint presentation ဒေါင်းလုဒ်ရန် ]
FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: From Theory To Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
Othman, M. et al. 2012. FLEGT Voluntary Partnership Agreements. ETFRN News 53: 109–116. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]